Andro: 9 Oktobra 2019
Volavolan-tsika tiorka izay eritreretintsika vahiny
1. PASTAVILLA PASTA Pastavilla, satria noheverina ho marika Italiana pasta tiorka. Hita tamin'ny 1928. Tamin'izany fotoana izany dia nomena anarana hoe Pastavilla tao amin'ny 1992 izy rehefa nantsoina hoe Kartal Pasta, ary izy mandraka androany. 2. TÜRKÇE HOME Ho an'i Turgut Aydın Holding [More ...]
NY ANTSIKA: Nalefan'i Yıldız Holding ny marika amin'ny Ajinomoto Japoney ao 2016. COLA TURKA: 2015 dia namidy tamin'ny Japaneselker tamin'i Dydo DRINCO Japoney Ülker. MILK: Sotroin'ny vondrona frantsay Lactalis. SANA OIL: [More ...]
Teratany vahana miaraka amin'ny mpanova Euros an-tapitrisany maro mba hijanona any Torkia
Metro Istanbul dia nahatsapa ny tetikasan'ny famokarana traction an-trano izay hanome angovo ho an'ny metro sy làlam-by. Araka izany, Euros tapitrisa dia mijanona ao anatin'ny faritry ny firenena. Istanbul Metropolitan Monisipaly fanampiny orinasa ao amin'ny Metro Istanbul, ny zava-dehibe Istanbul Torkia na ho an'ny toekarena [More ...]
Ny kalitaon'ny TÜDEMSAŞ, ny tontolo iainana, ny angovo ary ny fitantanana OHS dia nahita fahombiazana
Tiorka Institute Standards Institute (TSE) Kayseri Fandrindran'ny faritra momba ny fanaraha-maso ny rafitra fitantanana ny kalitaon'ny orinasa anay. Nandritra ny fivoriana fanombanana natao taorian'ny fanamarinana, dia voalaza fa nampiseho fahombiazan'ny fitantanana mahomby amin'ny sehatry ny kalitao, tontolo iainana, angovo, fahasalamana ary fiarovana ny asa. tse [More ...]
Sivas Demirspor Club misokatra amin'ny vanim-potoana vaovao
Sivas Demirspor Club 2019-2020 nanokatra ny vanim-potoana. Sivas Demirspor Club opening program of Tüdemsaş Manager General and Chairman of Sivas Demirspor Club Mehmet Basoglu, Demiryol-Is Union Sivas Sekretera ara-bola ny sampana Kemal Expert, Sivas Demirspor Club management [More ...]
Ny tanànan'i Malatya Metropolitan dia mirotsaka amin'ny fanovana, fanovana ary fanavaozana ny Golden Apricot Boulevard, izay boulevard lehibe indrindra any Malatya, izay mampifandray ny asa Tecde mankany Maşti. Ny 3.3 kilometatra lava, ny faritra 50 metatra toradroa volamena volamena [More ...]
Ny ben'ny tanànan'i Gaziantep Metropolitan Fatma Sahin, distrikan'i Belkis any amin'ny faritr'i Sehitkamil dia nandeha tamin'ny fitsidihana ny manodidina. Sahin, mba hamahana ny olan'ny fijanonan'ny bisy tsy manam-paharoa amin'ny ekipan'ny mpifanila trano dia nangataka i Belkis hanomboka ezaka hampitomboana ny fijanonan'ny bus amin'ny manodidina. ara-tsosialy [More ...]
Fifanarahana nasionaly ho an'ny sidina Metro ao Istanbul. IMM, izay ho nilalao ny Zoma hariva ao Torkia - Albania lalao iraisam-pirenena ny fotoana mahamety izany dia mitohy ny ora sasany metro andalana. Ny sidina amin'ny zotram-piaramanidina alefan'ny Metro Istanbul, departemanta iray ao amin'ny Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), 11 [More ...]
Fepetra fanampiny hanoherana ny lozam-pifamoivoizana IETT
Na eo aza ny fihenan'ny lozam-pifandraisana 2019 amin'ny lozam-pifamoivoizana Metrobus, ny IETT dia nanao fandalinana vaovao momba ny lozam-pifamoivoizana roa farany. Ny Lehiben'ny Birao Mpanadihady no nanendrena manokana hamantatra ireo loza. Hangatahana manam-pahaizana avy amin'ny Chamber of Mechanical Engineers [More ...]
Ny lalamby lalamby any Bursa dia tsy haingana loatra 'fenitra avo'
Night ken Raha nijery ny tranokalan'ny TCDD izahay dia nahita ny teninay amin'ny pejy 2019 Investment Program. Ankoatr'izay, gaga izahay nahita ny fampahalalana ao amin'ny pejy. Ny hitantsika izao dia izao: Tale Jeneraly TCDD Jeneraly 1 Tamin'ny Aogositra 2019 dia nanao fanavaozana fahadimy tamin'ny programa fampiasam-bola. [More ...]
Nisokatra tany Irbid, tanàna faharoa lehibe indrindra any Jordania ny fampirantiana "nanomboka tao Istanbul ka Hijaz". Tamin'ny volana Jona lasa teo niaraka tamin'i TİKA sy YEE [More ...]
Bursa Ankara Tetikasa Haingam-pandeha ambony any Bursa Ankehitriny? ..
Solombavambahoakan'i CHP Bursa, Mpikambana ao amin'ny Mpikambana Mpikambana ao amin'ny Parlemanta Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turhan'a Bursa Ankara Fiaran-dalamby haingam-pandeha avo lenta dia nanontany rehefa vita. Ny fototry ny tetikasa Bussa-Ankara High Speed ​​Train 23 Desambra [More ...]
3 dia mifantoka amin'ny rafitry ny lalamby metro. Ny Forum Metrorail International dia namory ny mpanapa-kevitra ho an'ny daholobe sy ny sehatra tsy miankina ao Ankara ATO Congresium. Eo ambany fiahian'i Cahit Turhan, minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa, ny TCDD Fanohanana lehibe, KGM, AYGM Istanbul Metropolitan Munisipaly [More ...]
Fanatrarana ny fitrandrahana any amin'ny ambaratonga fiakaran'ny havoana dia ho tanterahana ny vaovao fiaran-dalamby sy vaovao hafa mety ho liana amin'nyRayHaber Bulletin 25.01.2019 Tender Bulletin 25 / 01 / 2019 Tsy misy raki-tsoratra ho an'ny 25.01.2019 ao amin'ny rafitra.RayHaber Bulletin Tender 04.02.2019 04 / 02 / 2019 Ao amin'ny rafitra ataonay 04.02.2019 [More ...]
Eurasia Rail ao amin'ny 2021 ho an'ny sambany ao Konya
Hyvä Group dia voalamina any Torkia "dalamby Iraisam-pirenena, Light dalamby sy Logistics Fair" - Eurasia lalamby eo amin'ny xnumx'uncu Martsa 9 3-5 no natao tao amin'ny TUYAP Fair in Center Konya. Ny fair, izay natao tany İzmir mandraka ankehitriny, dia hotanterahina any Konya. [More ...]
Ny fiara avy amin'ny Volkswagen Dia hoentina tahaka an'io
Torkia loha masiny sy Engine Industry toy ny (TULOMSAS), alemà goavana Volkswagen fiara mba ho vokarina any amin'ny orinasa vaovao mazava mba hampitoerina amin'ny Torkia no antenaina hitondra "roa rihana sarety" nitranga fahiny sary, ny voalohany teo amin'ny HaberTürk ... Eto any Torkia, TULOMSAS ' Injeniera sy teknisianina Tiorka ao amin'ny trano Eskişehir [More ...]
MESİAD: 'Tokony hatsangana ny rafitry ny lalamby hazavana fa tsy any Metro mankany Mersin'
MESİAD Ny filoha Hasan Engin dia nanantitrantitra fa tsy manam-potoana ho very i Mersin hamahana ny olan'ny fitaterana, izay iray amin'ireo olana goavana indrindra eto amin'ny tanintsika. Metro [More ...]
Nitombo ny sidina Metro tao Istanbul
Nitombo ny sidina Metro tao Istanbul Raha ny fanambarana avy ao amin'ny Metro Istanbul, ny M6 Levent-Boğaziçi University / Hisarüstü metro dia nampitombo ny isan'ny sidina. Tao anatin'ny fanambarana voasoratra, ireto fanambarana manaraka ireto dia nomena: -M6 University University Levent-Boğaziçi / Hisarüstü metro dia vita mandritra ny andro minitra 9 minitra [More ...]
Androany ao amin'ny Tantara: 9 Oktobra Ny fizotry ny fizahan-toetra voalohany tao amin'ny Eurasia Tunnel ras
Androany tao amin'ny Tantara 9 Oktobra Nalefa tamin'i M. Alfred Kaulla ny fandefasana ny 1890 Thessaloniki-Monastery, izay niasa ho an'ny vondrona Alemana iray niaraka tamin'ny Banky Deutsch. Nomena an'i Feriz aloha ny Amerikana. 9 Oktobra 1918 Toros sy tunnel Amanos dia vita. ny fanorenana [More ...]